7 ဥရောပရှိအလှဆုံးရေတံခွန်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7ဥရောပရှိအလှဆုံးရေတံခွန်များ
ဥရောပသို့ခရီးသွားခြင်းသည်ခမ်းနားထည်ဝါသောနန်းတော်များသို့ပြန်လာခဲ့သည်, သစ်တောများ, နှင့်အလှဆုံးသဘာဝနှင့်ရေတံခွန်များ. သင်အီတလီသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်သို့ခရီးသွားနေကြသည်ဖြစ်စေမ, စီစဉ်သည်2လကြာယူရိုခရီးစဉ်, သို့မဟုတ်ဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်သာတစ်ပတ်သာရှိသည်, သင်စူးစမ်းလေ့လာရန်အချိန်ယူရမည် 1 ဥရောပ၌လှပသောရေတံခွန်၏, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်း7ဥရောပ၌အလှဆုံးရေတံခွန်.
1. ဥရောပရှိအလှဆုံးရေတံခွန်များ: Marmore ရေတံခွန်များ, အီတလီ
Marmore ရေတံခွန်သို့ရောက်ရှိ 165 ထဲကအမြင့်ဆုံးနှင့်အတူမီတာ3၏အမြင့်မှာ 85 မီတာ. ထိုကွောငျ့, ဥရောပ၌လူလုပ်အမြင့်ဆုံးရေတံခွန်သည်မာမားရေတံခွန်ဖြစ်သည်. ဒီရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ရေတံခွန်ဟာ Umbria ဒေသရဲ့အလယ်မှာတည်ရှိပြီးရှေးခေတ်ရောမတွေကဖန်တီးခဲ့တာပါ.
အဖြူရောင်ရှိကျောက်တုံးများနှင့်အဆင့်ပေါင်းစုံရေတံခွန်များကိုရောမ Termini မှ Terni မြို့သို့ရထားဖြင့်အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သည်. Terni သို့ရထားများမကြာခဏသွားပြီးရထားတစ်နာရီတိုင်းထွက်ခွာသည်. သင် Terni မီးရထားဘူတာရုံရောက်တဲ့အခါ, သင့်ကိုရေတံခွန်ဆီပို့ဆောင်ပေးမယ့်ဘတ်စ်ကားတွေရှိတယ်. ရေတံခွန်များအတွက်ဝင်ပေါက်တစ်ခုကျပါတယ်.
သို့သျောလညျး, Trenitalia မီးရထားလက်မှတ်ဖြင့်သင်လျှော့စျေးရပြီး Marmore ရေတံခွန်သို့ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းအတွက်နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်:)
ငါတို့ဆီမှအနည်းငယ်အတွင်းလူရဲ့အစွန်အဖျား, ရှိပါတယ် ကြီးမြတ်စားသောက်ဆိုင် Marmore ရေတံခွန်များ၏ခြေရင်းမှာ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ Da Da Panzerotto မှာ -go သွားဖို့ panini ဖမ်းဆီးဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်. တစ် ဦး ရှိခြင်း တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာပျော်ပွဲစား အဆိုပါရေတံခွန်အားဖြင့်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံထက်အများကြီးသာ။ ကောင်း၏.
2. ဘူမိအပူရေတံခွန်, အီတလီ
အီတလီနိုင်ငံတွင်အကျော်ကြားဆုံးနှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသည့်ရေတံခွန်သည် Di Saturnia ရွာရှိရေတံခွန်ဖြစ်သည်. Tuscany တွင်တည်ရှိသည်, Saturnia ရေပူစမ်းသည်အလှဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ဥရောပ၌သဘာဝအပူစမ်း. ဤမြို့ငယ်လေးသည်ရောမခေတ်ကတည်းကကျော်ကြားသောစမ်းရေတွင်းများရှိခဲ့သည်. သင်၏ Tuscany အားလပ်ရက်သည် Saturnia ၏ပူပြင်းသောရေတံခွန်များတွင်တစ်ရက်သာမပြည့်စုံပါ. အနီးအနားရှိအခြားလှပသောရေတံခွန်များသို့လည်ပတ်ပြီးနောက်စမ်းရေသည်အပန်းဖြေရန်အလွန်ကောင်းသည်, ကြိတ်စက်, နှင့် Gorello ၏ရေတံခွန်.
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Saturnia ရေတံခွန်များသည် ရထားစီးနင်း ဝေးရောမမြို့ကနေ. ပဌမ, သင်ရထားစီးတယ် Orbetello-Monte Arg သို့. ထို့အပြင်လှပသောရေတံခွန်များကိုကားသို့မဟုတ်တက္ကစီဖြင့်သင်ရောက်နိုင်သည်, အားလုံးထက်လျော့နည်းအတွက်3ရောမမြို့ကနေနာရီ.
Orbetello Monte Argentario လက်မှတ်မှရောမ
3. ဥရောပရှိအလှဆုံးရေတံခွန်များ: ရိန်းရေတံခွန်များ, ဆွစ်ဇာလန်
Worth ရဲတိုက်နှင့် Schloss Laufen နန်းတော်အပေါ်သို့ကြည့်ရှု, ရိုင်းရေတံခွန်များသည်ဥရောပရှိအကျဆုံးဆုံးရေတံခွန်များဖြစ်သည်. ပထမတစ်ချက်မှာ, ရိုင်းရေတံခွန်များအလွန်တိုတောင်းပုံရသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရမ်းကျယ်ပြန့်ဖြစ်ကြသည်. သင်သည်ဤလှပသောရေတံခွန်များကိုသူတို့၏ဘုန်းအသရေဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည် မြစ်ထဲမှာလှေစီး.
ရေခဲအရည်ပျော်ပြီးပတ် ၀ န်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြေပြီးတဲ့နောက်နွေရာသီမှာ Rhine ရေတံခွန်တွေဆီသွားလည်ပတ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်. ရိန်းရေတံခွန်များမှာ 50 ဇူးရစ်မြို့မှမိနစ်ခန့်ရထားစီး။ သွားသောအခါရေတံခွန်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရထားဘူတာနှစ်ခုရှိသည်. ထိုကွောငျ့, မိသားစုများနှင့်မိသားစုများအတွက်အံ့သြဖွယ်ရေတံခွန်သို့သွားရန်အလွန်လွယ်ကူသည် တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားများအတွက်.
4. Staubbach ရေတံခွန်, ဆွစ်ဇာလန်
ချစ်စရာကောင်းတဲ့တောင်ပေါ်ရွာကိုကြည့်ရတာ, ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Lauterbrunnen ချိုင့်၌ Staubbach ရေတံခွန်သည်ခမ်းနားထည်ဝါသည်. ဤအရပ်ရှည်သောရေတံခွန်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရှုခင်းသည်ရင်ခုန်စရာပန်းချီကားတစ်ချပ်နှင့်တူ၏. တကယ်ရှိပါတယ် 72 Lauterbrunnen ချိုင့်၌ရေတံခွန်များ, ဒါပေမယ့်သံသယမရှိဘဲ, Staubbach ရေတံခွန်သည်သူတို့ထဲမှအလှဆုံးနှင့်ရင်ခုန်စရာဖြစ်သည်. နွေ ဦး ရာသီ၌, ချိုင့်ဝှမ်းသည်အလွန်လှပသောအရောင်များဖြင့်ရှင်သန်လာပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောအပူချိန်ကထိုဒေသကိုတောင်တက်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းတို့ကိုခွင့်ပြုသည်.
တချို့ကဒီဆွစ်ဇာလန်ချိုင့်ဝှမ်း J.R.R Tolkein ရဲ့ဝတ္ထု Rivendell မှုတ်သွင်းသည်ဟုဆိုကြသည်, သူသည်ရွာငယ်လေးတွင် နေ၍ သူ၏ခြေထောက်ရှိကဖီးမှရေတံခွန်၏အမြင်များကိုလေးစားမိသည်.
Staubbach ရေတံခွန်များသည် Bern မြို့နှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီး Lauterbrunnen ချိုင့်ဝှမ်းသို့မကျော်လွန်ပဲသင်သွားနိုင်သည်။3Lucerne ကနေဒါမှမဟုတ်ထက်နည်းအတွက်ရထားဖြင့်ခရီးသွားနာရီ4ဂျီနီဗာကနေနာရီ. ဘူတာရုံမှ, အဆိုပါရေတံခွန်များတစ်လမ်းလျှောက်ဝေးဖြစ်ကြပြီးသင်ရုံမြို့ရဲ့အလယ်ဗဟိုကိုဖြတ်ကူးဖို့လိုအပ်ပါတယ်.
Lucerne သို့ Lauterbrunnen လက်မှတ်များ
ဂျီနီဗာမှ Lauterbrunnen လက်မှတ်တွေ
Lucerne မှ Interlaken လက်မှတ်တွေ
Zurich မှ Interlaken လက်မှတ်များ
5. ဥရောပရှိအလှဆုံးရေတံခွန်များ: Stuibenfall, Tyrol, သြစတြီးယား
သငျသညျအစွန်းရောက်ကိုချစ်ပြီးအထူးသဖြင့်လှပသောအမြင်များကိုရှာဖွေလျှင်, Tyrol ရှိ Stuibenfall ရေတံခွန်ကိုသင်လုံးဝကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်. ဆိုင်းထိန်းတံတားများနှင့်လိမ်နေသောမျှော်စင်များသည်ဤအံ့ဖွယ်ရာရေတံခွန်ကိုတက်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းစေသည်. Tyrol ၏အမြင့်ဆုံးနှင့်အကြီးမားဆုံးရေတံခွန်သည် 2.4km ဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်သင်ကဒီကနေတစ်လှည့်ပတ်ခရီးတစ်ရက်တောင်တက်အတွက်စူးစမ်းနိုင်ဘူး. အဆိုပါ တောင်တက်လမ်းကြောင်း Umhausen မြို့ရှိကားရပ်နားရာနေရာတွင်အပြီးသတ်သည်.
သင်သည်ခရီးသွားများနှင့်ခရီးသွား many ည့်သည်များစွာနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရှိသည်, ဒါကြောင့်အထီးကျန်ခံစားခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့.
မြူးနစ်သာ3Stuibenfall မှရထားဖြင့်နာရီအနည်းငယ်အကွာအဝေး. ဒါကြောင့်, ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အလုပ်များသောမြို့မှဥရောပရှိအလှဆုံးရေတံခွန်တစ်ခုသို့တနင်္ဂနွေကိုအလွယ်တကူလွတ်မြောက်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်. ဒါကြောင့်, သင်သည်သင်၏နွေ ဦး အားလပ်ရက်ဥရောပ၌သင်၏ကျေးလက်နှင့်မြူးနစ်နှစ် ဦး စလုံးပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်.
6. Krimml ရေတံခွန်, သြစတြီးယား
သြစတြီးယားရဲ့တွင်တည်ရှိသည် အကြီးဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်, အမြင့် Tauern အမျိုးသားဥယျာဉ်, Krimml ရေတံခွန်သည်သုံးလွှာရေတံခွန်ဖြစ်သည်, ရောက်ရှိ 1490 အမြင့်နှင့်မီတာ 380 မီတာအမြင့်. ရှေးဟောင်းသစ်တောများ, မန်, သမင်နီ, နှင့်ရွှေလင်းယုန်များဥရောပ၌အခြားသောအံ့သြဖွယ်ရေတံခွန်သို့သင်နှင့်အတူလမ်းကြောင်းဖြတ်ကူးစေခြင်းငှါပန်းခြံရဲ့မြို့သားအနည်းငယ်ပဲ. သင်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် စိတ်အားထက်သန် နှင့်အတွေ့အကြုံရှိခရီးသည်, ဒီပန်းခြံနဲ့ Krimml ရေတံခွန်တွေဟာသြစတြီးယားကုန်းမြင့်ဒေသတွေမှာမမေ့နိုင်စရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်.
Krimml ရေတံခွန်များကျလာသောအခါနှင်းများအရည်ပျော်ပြီးနောက်ရေတံခွန်များပတ်လည်ရှုခင်းသည်အထူးသဖြင့်နွေ ဦး ရာသီတွင်ထူးခြားသည်။, ရှည်လျားသောဆောင်းရာသီအပြီးငှက်များသီဆိုခြင်းနှင့်ခမ်းနားထည်ဝါသောတိရစ္ဆာန်များနိုးထလာကြသည်.
သငျသညျဖြစ်စေမောင်းနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ် ရထားယူ & Krimml ရေတံခွန်များသို့ကားစီးပါ. ဒီခရီးကနည်းတယ်3Salzburg ထံမှနာရီနှင့်သင်အချိန်သြစတြီးယားရဲ့ပရဒိသုလမ်းလျှောက်လိမ့်မည်.
7. Gavarnie ၏ရေတံခွန်များ, ပြင်သစ်
စိမ်းလန်းစိုပြည်တဲ့ချိုင့်ဝှမ်းတွင်တည်ရှိသည်, ပြင်သစ်တွင်မြင့်မားသော Gavarnie ရေတံခွန်များဖြစ်ကြသည် 422 မီတာအမြင့်နှင့်ခရီးသွား among ည့်အကြားအလွန်ရေပန်းစား. Hautes Pyrenees ၏အမြင်နှင့်အတူ, အဆိုပါ Gavarnie ရေတံခွန်နှစ် ဦး စလုံးသည်စူးစမ်းခြင်းနှင့်အနိုင်ရချင်သောလေးနက်သောတောင်တက်သမားများအတွက်ရင်ခုန်စရာကောင်းပြီးစုံလင်သည် ပြင်သစ် Pyrenees. Gavarnie ရေတံခွန်သာဖြစ်ပါတယ် 40 Gavarnie ရွာကနေမိနစ်ခန့်ကားမောင်း.
လှပသောရေတံခွန်များသည်ပြင်သစ်နှင့်စပိန်တို့အကြားရှိရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော Pyrenees ကျွန်းဆွယ်နှင့်သာတည်ရှိသည်4မီးရထားဖြင့်နာရီပေါင်းများစွာကွာ Toulouse မှ.
ဥရောပသည်အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်သည် တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားများအတွက်နှင့်မိသားစုများအတွက်. ဒါဟာဥရောပကိုဖြတ်ပြီးသွားလာရန်အလွန်လွယ်ကူသည်နှင့်ငါတို့စာရင်းတွင်လှပသောရေတံခွန်များအားလုံးရထားသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားအားဖြင့်အလွန်လက်လှမ်းဖြစ်ကြသည်, အဘို့ နေ့ခရီးများ သို့မဟုတ်စခန်းချ, စွန့်စားခံစားနှင့်ဥရောပ၏သဘောသဘာဝရဲ့အကောင်းဆုံးရှာဖွေစူးစမ်း၏အိပ်မက်ဖြစ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံရှိခရီးသွားများအတွက်သို့မဟုတ်အရင်ကဆိုရင်အဘို့.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ငါတို့စာရင်းထဲရှိလှပသောရေတံခွန်များသို့အနိမ့်ဆုံးရထားလက်မှတ်နှင့်ခရီးသွားလာလမ်းကြောင်းများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “7 ဥရောပရှိအလှဆုံးရေတံခွန်များ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-waterfalls-europe/?lang=my ့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
europetravel ရထားခရီးသွား ဟုတ်ပါတယ် travelgermany Travelingtips travelswitzerland ရေတံခွန်များ ရေတံခွန်